Kuthungathwa owesifazane onyamalele | News24
Kuthungathwa owesifazane onyamalele
ISITHOMBE: SITHUNYELWE Amaphoyisa athungatha uNksz Gugu Carol (osesithombeni) onyamalale ephuma emsebenizni oThongathi.
KUTHUNGATHWA owesifazane oneminyaka yobudala engama-25 onyamalale ngomhla ka-19 Lwezi(November). Lona wesifazane owaziwa ngokuthi nguGugu Carol kubikwa ukuthi ngesikhathi ephuma efemini asebenza kuyo eseTruro Lands oThongathi waphelezela umngani wakhe baya esikhumulweni samatekisi. Ngokombiko wamaphoyisa asoThongathi uNksz Gugu ngemuva kokuhlukana nomngani wakhe wasuka esikhumulweni samatekisi wayodayisa izigcobo kumakhasimende akhe.
Okhulumela amaphoyisa asoThongathi uW/O Manisha Maharaj-Marie uthe kusukela ngalelo langa akazange abuyele ekhaya. Kucelwa amalungu omphakathi angaba nolwazi athintane namaphoyisa asoThongathi kule nombolo 032 944 9900.